Abakhiqizi be-Cook Ware - Abahlinzeki base China Cook Ware & Factory
insimbi yensimbi enamathele skillet
i-cast iron enameled skillet BCS31: 26.5 * 5.7CM Material: cast iron Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: color enameled or preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB ihlolwe, Siyakha, siqinisekisa isikhathi sokukholelwa nekhwalithi.
sakaza insimbi onsomi enameled gazinga amapani
insimbi yensimbi ensimbi eluhlaza okwesibhakabhaka eyenziwe ngamakhemikhali BCS14: 27 * 8CM Izinto: imodeli yensimbi yensimbi: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Isembozo: umbala owenziwe umbala noma owandulelwe kusengaphambili isikhathi nekhwalithi.
cast griddles yensimbi enameled
inkatho yensimbi yensimbi eyenziwe nge-BCRG03: 32 * 3CM Izinto: Imodeli yensimbi yensimbi: I-BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Isembozo: umbala owenziwe umbala noma owenzelwe kusengaphambili ikhwalithi.
i-cast iron i-trivets enameled ikhwalithi.
phonsa insimbi koqweqwe lwamabhodwe
cast iron koqweqwe lwawo amabhodwe BCS30: 21.2 * 8.5CM Material: cast iron Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: umbala enameled noma preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB ihlolwe, Sakha, siqinisekisa isikhathi sokukholelwa nekhwalithi.
insimbi yensimbi eyenziwe ngaphambilini yensimbi ngesibambo eseceleni
i-cast iron preseasoned gazinga amapanethi BCS13: 25.5 * 5.5CM Izinto: imodeli yensimbi yensimbi: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Isembozo: umbala owenziwe umbala noma owandulelwe iBV, CE, SGS, FDA, LFGB ihlolwe, Siyakha, siqinisekisa ukukholwa isikhathi nekhwalithi.